admin – Page 207 – Myanmar
တိရစ ္ဆာန်တွေကို ရုပ်ကြွင်းအဖြစ် ပြောင်းလဲပစ်လိုက်တဲ့ အာဖရိကန်ရေကန်ကြီး
တိရစ ္ဆာန်တွေကို ရုပ်ကြွင်းအဖြစ် ပြောင်းလဲပစ်လိုက်တဲ့ အာဖရိကန်ရေကန်ကြီး အာဖရိက အရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့ Tanzania လို့ခေါ်တဲ့ နိုင်ငံမှာ Lake Natron လို့အမည်ရတဲ့ ရေကန်ကြီးတစ်ခုရှိပြီး တိရစ ္ဆာန်တွေဟာ အဲ့ဒီကန်ကြီးထဲရောက်ရင် သေကြေပျက်စီးသွားရပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကိုတော့ Nick Brandt ရဲ့ အမိအရ ဓါတ်ပုံရိုက်ချက်တွေနဲ့အတူ တင်ပြပေးပါဦးမယ်။ […]
အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ အမေရောသမီးကိုပါ တစ်ပြိုင်တည်း ပိုးပန်းမိသောကောင်လေး
Zack အမည်ရှိ လူငယ်လေးတစ်ဦးဟာ နာမည်ကျော် ကြင်ဖက်ရှာဖွေရေး app တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Badoo မှာ Chelsey Rochford အမည်ရှိ အမျိုးသမီးကို ပိုးပန်းမိပါတယ် ၊ တစ်ပြိုင်တည်းမှာပဲ သူဟာ Chelsey Rochford ကို ပိုးပန်းတဲ့ တော်ကီတွေအတိုင်း သူမ ရဲ. မိခင်ကိုလည်း […]
အချိုမှုန့်တဲ့။ မြန်မာအခေါ်အဝေါ်ပေါ့။ ဓာတုဗေဒနည်းအရခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့ Monosodium glutamate လို့ခေါ်ပါတယ်။ထုတ်ပေါ်ပုံဖော်မြူလာအရတော့ C5H8NO4Na ပါတဲ့။ အင်္ဂလိပ်လိုအတိုကောက်ကတော့ MSG လို့ခေါ်ပြန်တယ်။ (ရပ်ကွက်စကားအရဆိုရင်တော့ အာဂျီနိုမိုတိုပေါ့)စာဖတ်သူတွေသိကြပါတယ်။ အချိုမှုန့် ကိုအရင်ကဆို နေ့စဉ်စားသုံးခဲ့ကြဖူးတယ်။နောက် ရောဂါဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သတိပေးချက်တွေထွက်လာတော့ တချို့တွေကလုံးဝမစားကြတော့ဘူး။တချို့တွေကျတော့လည်း မပါမဖြစ် ထည့်ပြီး စားနေကြတုန်း။အဲ့လောက်တော့ သိခဲ့ကြပါတယ်။ အခုပြောပြမှာတွေကိုတော့ သိပြီးတဲ့သူတွေရှိသလို […]
ျခင္ေတြက သင့္ကိုပဲေ႐ြးကိုက္ေနတာ ဘာေၾကာင့္လဲ..?
သူေတြပါတဲ့။ သင္ေရာ အဲဒီ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာလူေတြထဲမွာပါေနၿပီလား။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ ျခင္ေတြက လူေတြအမ်ားႀကီးရွိတဲ့အထဲကမွ သင့္ကိုပဲ ေ႐ြးၿပီးကိုက္ရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းကို သိဖို႔လိုအပ္ေနပါၿပီ။ ဘာအေၾကာင္းရင္းေတြေၾကာင့္ အၿမဲ ျခင္ေတြရဲ႕ သားေကာင္ျဖစ္ေနရလဲဆိုတာ ၾကည့္လိုက္ပါဦးေနာ္။ အဝတ္အစား ျခင္ေတြကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ သားေကာင္ကို အျမင္နဲ႔ပဲ ရွာေဖြေလ့ရွိပါတယ္။ျခင္ေတြကေတာ့ အျမင္အာ႐ုံေကာင္းၾကၿပီး ညေနပိုင္းအခ်ိန္မွာ […]